नेपालमै सञ्चालन हुने भयो खुला विश्विद्यालय, यसरी पढ्न सकिन्छ
काठमाडौं । ७० को दशकको सुरुदेखि नै अन्त खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए पनि नेपालमा भने यो वर्ष देखि सुरु हुने भएको छ । पैसा र समय भएरपनि नियमित कलेज वा विश्वविद्यालयको कक्षामा जान नसक्ने र वर्षौंदेखि पढाइ छुटेकाले जुनसुकै स्थानबाट आवेदन दिइ अब घरमै अध्ययन गरेर पीएचडीसम्मको डिग्री लिन पाउने भएका छन् । विश्वविद्यालयले आउँदो हप्ता आवेदन खोल्ने भएको छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले १७ गतेको प्राज्ञिक परिषदको बैठकपछि भर्ना आवेदन खोल्ने बताए । नेपालमै पहिलोपटक स्थापना भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयले अब इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापन गराई डिप्लोमादेखि पीएचडीसम्मको डिग्री दिने छ । खुला विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद् बैठकले डिप्लोमा, पोस्टग्रयाजुएट, मास्टर्स, एमफिल र पीएचडीसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कुलपति शर्माका अनुसार अनलाइनबाट एक महिनाभित्र भर्ना गर्न सकिनेछ । उनले अहिले पाठ्यक्रम बनाउने काम भैरहेको बताए ।
यस्तो छ भर्ना हुने प्रावधान
१२ कक्षा पास भएकाहरु जो पनि खुला विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाउने छन् । धधध।लयग।भमग।लउ वेवसाइटमा गएर भर्नासम्बन्धी जानकारी लिन पाइन्छ । शर्माका अनुसार रजिष्टे«सन, एडमिसन सबै अनलाइनको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ र यही मानभवन लपलतपुरस्थित विश्वविद्यालयमा आएर पनि गर्न सकिने छ ।
“खुला शिक्षा भनेपछि जो सुकैले जे पनि पढ्न पाउँछु भन्ने हुन्छ,” कुलपति शर्मा भन्छन्, “अहिले व्यवस्थापन, कानुन संकाय, सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय स्थापना हुने छन् । यस्ता संकायबाट साधारण विषयदेखि इन्जिनियरिङसम्मका विषय दूरशिक्षाबाट पढ्न पाइनेछ,” उनले भने, “विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि संकाय स्थापना हुनेछन् । यसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपदेखि ‘पियोर साइन्स’ का विषय पनि अध्ययनको व्यवस्था हुनेछ । तर यसका लागि केही समय लाग्नेछ ..